Iindaba -Carlon Fair Onlline Incoko
Siza ukuya guangzhou ibhokisi fair ukususela ngoJuni 15 ukuya kuJuni 25
Ngenxa yokusasazeka kwintsholongwane kwihlabathi liphela, asinakuya eGuangzhou ukudibana kunye, ngoko ke senza umboniso we-Intanethi. Itekhnoloji entsha ukubonelela ngomboniso kwi-Intanethi. Nokuba usekhaya, ungayibona into yethu. Ungayibona yonke into ofuna ukuyibona. Siza kwenza umboniso we-24hour live, siya kukuthatha siye e-ofisini yethu yokusebenza, umgca wokuvelisa, isitokhwe sempahla yethu, indlela yethu yokulayisha, kunye neqela lethu.
Ukuba awuyazi indlela yokusifumana, ungaya kwiwebhusayithi yebhokisi enobungozi: http://www.cantonfair.org.cn kwaye ukhangele umnquba wethu onguNombolo 11.2 L 43, okanye ungasebenzisa indlela yesibini ngokukhangela iimveliso ezifana nombhobho wensimbi.
Ayingabo bonke abathengisi be-chinese abanokuya kule vidiyo ye-Intanethi, kuphela yinkampani elungileyo ebhaliswe yi-China Ministry of Commerce enokuya kuyo, ukuze uphumle ukhethe umthengisi owufunayo.
Okokugqibela, ndikulindile ukuba undwendwele umnquba wethu No. Kwaye wenze ubuso ngobuso ukuthetha nam.
Ixesha Post: Jun-06-2020